Prison Architect ine chakakosha dhisikaundi uye inotangisa Island Bound | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida mitambo yemavhidhiyo kwaunogona kuvaka nekugadzirisa yako wega "empire", saka iwe unofanirwa kuziva Architect Prison. Uyu mutambo wevhidhiyo unowanikwa kuLinux, Mac uye Windows muchitoro chako chaunofarira, sezvazviri Valve Steam, kunyangwe iwe uchigona zvakare kuiwana mune vamwe vakaita seGOG neHumble Store. Kusvika mangwana unenge uine 75% dhisikaundi, nekudaro, kwasara maawa makumi maviri nemana chete kuti uwane ichi chinopihwa ...
Isati yadhura € 24.99 uye izvozvi ndezve € 6.24 chete. Kunze kwemashoko akanaka aya, iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti ivo vakaburitsa kuwedzera kunonzi Island Bound iyo zvakare yakagadzirira Linux. Naizvozvo, tora mukana weichi chipo uye tora iyo yese yezvinyorwa zvirongedzo. Iwe une kuwedzera kwe € 9,99, pamwe nezvimwe zvina zvirimo zviripo uye imwe yacho yemahara zvachose.
Iyo yekuvandudza Double Eleven anga ari mugadziri wemutambo uyu, uyo pamwechete neParadox Interactive, vakakwanisa kuvhura izvi Island Bound kuwedzera. Nekuwedzera uku, vatambi vanozokwanisa kuvaka jeri pachitsuwa vasingade nzira yemugwagwa. Ngarava nemaherikoputa zvinogona kushandiswa senzira yekufambisa.
Pakati pe zvitsva yakawedzerwa nekuwedzera uku ndeiyi:
Gungwa neMhepo. Iye zvino unogona kuve neherikoputa uye zvikepe zvekuvaka majeri pazvitsuwa. Nenzira iyi ivo vanokwanisa kuendesa zvekushandisa uye nevasungwa vatsva kwauri pasina kuve nemugwagwa unobatanidza chitsuwa.
Natsiridza kugona kwejeri nekubatana dhoku uye helipads. Zvakare nemakwara ekunongedzera chaiwo.
Kunonyanyisa kuchengeteka. Ikozvino kune chengetedzo huru yekutakura zvekushandisa, uye kuona kuti zvinhu zvakarambidzwa hazvipindirwe, pamwe nekuchengeta vasungwa mumasero avo. Iwe unenge uine mamwe mabasa ekukurumidzira kufona kana zvinhu zvabuda paruoko.
Inokutendera kuti ugadzirise zano yechitsuwa, nemhando dzinoverengeka dzezvinhu uye zvinhu zvekusarudza kubva. Iwe unogona zvakare kuumba nzvimbo yakatenderedza chivakwa chejeri, isa moats, nzizi, nyanza, nezvimwe. Unogona kuzviitira chengetedzo uye maitiro. Nekusada nzira dzekupinda nadzo, iwe unogona kufora zvese kudzivirira kuvuza.
Dombo. Iwe unozokwanisa kubata jeri rine mukurumbira pasi rese, nemamepu maviri akafanogadzwa neAlcatraz jeri uye Alcatraz chitsuwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Prison Architect ine chakakosha dhisikaundi uye inotangisa Island Bound
RISC-V: yakanyanyisa tekinoroji uye yakavhurika sosi yekuongorora Venus